Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Iindiza kwiFlyr kunye neVueling ezisuka eMilan Bergamo ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
UMilan Bergamo ubhengeza ukongezwa kwamaqabane amatsha eenqwelomoya kwiBusika 21/22, eqinisekisa ukufika kweFlyr kunye neVueling kwiinyanga ezizayo.
Yazisa ngoJuni ngeenqwelomoya zasekhaya, inqwelo moya yokuqala yaseNorway iFlyr ifake iMilan Bergamo phakathi kweendlela zokuqala zamanye amazwe.
Ukuqinisa ngakumbi ukudibana kweMilan Bergamo, iSpanish LCC Vueling iya kuqala ukudibana neParis Orly ukusuka nge-2 kaNovemba.
UFlyr uza kuqala inkonzo-yeveki kabini kwisiseko sayo e-Oslo, eNorway ukuqala ngoJanuwari 5, 2022.
Kule veki Isikhululo senqwelomoya iMilan Bergamo ubhengeze ukongezwa kwamaqabane amabini e-airline aza kujoyina isikhululo seenqwelomoya ngexesha le-W21 / 22. Ukuthatha inani elipheleleyo labaphathi abamkelekileyo kuluhlu lwemasango eLombardy kulo nyaka, isikhululo seenqwelomoya sikuqinisekisile ukufika kweFlyr neVueling kwiinyanga ezizayo.
Yazisa ngoJuni ngeenqwelomoya zasekhaya, inqwelo moya yokuqala eNorway Iflaya ifakiwe UMilan Bergamo phakathi kweendlela zokuqala zamazwe aphesheya. Ukuvula indawo entsha kwindawo ekugcinwa kuyo amanzi eLombardy, umthuthi wexabiso eliphantsi (LCC) uza kuqala inkonzo ephindwe kabini ngeveki kwisiseko sayo e-Oslo ukusukela nge-5 Januwari 2022. Ukujoyina unxibelelwano lwesikhululo seenqwelomoya esikhoyo eSandefjord Torp, IflayaUnxibelelwano ngqo ne-Oslo luya kuthetha ukuba isikhululo seenqwelomoya sase-Italiya siza kubonelela ngezihlalo ezingama-756 ngeveki eNorway ngexesha lasebusika.
Ukomeleza ngakumbi UMilan BergamoUnxibelelwano, iSpanish LCC Vueling izakuqala unxibelelwano neParis Orly ukusuka nge-2 kaNovemba. Ukuqalisa ukusebenza kathathu ngeveki, ishedyuli entsha yenqwelomoya yenqwelomoya ye-IAG evela kwikomkhulu laseFrance iya kunyusa inethiwekhi yesikhululo seenqwelomoya esele iqinile eFrance. Ukubonelela ngezihlalo ezingama-5,190 ngeveki kwilizwe laseNtshona Yurophu, VuelingIkhonkco eliya eParis Orly liba yindawo yesixhenxe yaseFrance iBergamo, ejoyina iBordeaux, Marseille, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, Tarbes-Lourdes nase Toulouse.
Ethetha ngesibhengezo senqwelo-moya kunye nendawo esiza kuyo, u-Giacomo Cattaneo, uMlawuli wezoShishino lwezoPhapho, uSACBO uthi: “Kuhlala kumnandi kakhulu ukwamkela iqabane elitsha lenqwelomoya, ukwazisa amabini ngaxeshanye kuyinto entle, kwaye bobabini abathwali bongeza iindawo ezinomtsalane kwindlela yethu uthungelwano kunye nokuqonda amandla anokubakho ukusuka UMilan Bergamo. Ngezongezo zethu zamva nje ndiyazingca ngokuqinisekisa ukuba sineenqwelo moya ze-16 ezihambisa iindawo ezili-114 kumazwe angama-39 asuka kwingingqi yaseLombardy ebonisa ukuzithemba komntu wonke ekubuyeni nasekukhuliseni kwisikhululo senqwelomoya. ”
UCattaneo uyongeza: "Sineenqwelomoya ezininzi ezisebenza nathi kunye neWorld Routes eMilan kule mpelaveki, eli lixesha elifanelekileyo lokuba ezinye iinqwelomoya zize kuthetha nathi, sibe yinxalenye yamathuba nekamva elihle eMilan Bergamo."